ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒိုနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက် “ – Sport Gaber
ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ဂ်ုဗင္တပ္ အသင္းသည္ လစာအမ်ားအျပားေပးေခ်ေနရတဲ့ ကစားသမားေတြကို ေရာင္းခ်ဖို႔ ရွိေနၿပီး ေရာ္နယ္ဒိုလည္း ေရာင္းခ်မယ့္စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အသင္းကေန ထြက္ဖို႔ သတင္းေတြထြက္ေနတဲ့ ေရာ္နယ္ဒိုကို ေခၚယူဖို႔အတြက္ ယူႏိုက္တက္အသင္းပိုင္ရွင္ဂေလဇာမိသား စုနဲ႔ ေရာ္နယ္ဒိုတို့ တိတ္တဆိတ္ ေဆြးေနြးခဲ့ျကတယ္လို့ သတင္းေတြ အရ သိရဘာတယ္ ။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ 16 သင္းအဆင့္ကေန ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ ဂ်ုဗင္တပ္ အသင္းသည္ လက္ရွိမွာေတာ့ ေပၚတူဂီ ဂိုးသြင္းဘုရင္ တိုက္စစ္ ကစားသမား ေရာ္နယ္ဒိုနဲ႔ လမ္းခြဲဖို႔ နီးစပ္ေနတယ္လို့ သိရဘာတယ္ ။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလားရယူႏိုင္ဘို့. အတြက္ ေရာ္နယ္ဒိုကို ေခၚယူခဲ့တဲ့ ဂ်ုဗင္တပ္ အသင္းသည္3ႏွစ္ဆက္တိုက္အေစာပိုင္းအဆင့္ေတြကေနပဲ လွည့္ျပန္ေနခဲ့ရလို႔ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ေရာ္နယ္ဒို နဲ႔ လမ္းခြဲကိန္းဆိုက္လာခဲ့တာ ေတြ့ရဘာတယ္ ။
သတင္းေတြထြက္လာတိုင္းမွာ ေရာ္နယ္ဒိုက ယူႏိုက္တက္ အသင္း ကို ေရာက္မွာလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကလည္း ထပ္ရွိလာျပန္ပါတယ္။ ႏွစ္တိုင္းလိုလိုမွာ ေရာ္နယ္ဒိုက ယူႏိုက္တက္ဆီျပန္လာမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြက အေျခအေနတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုေၾကာင့္ထြက္ေပၚေလ့ရွိၿပီး အသင္းပရိသတ္ေတြကလည္း ဘယ္အခ်ိန္ပဲျပန္လာလာ ရင္ဖြင့္ႀကိဳဆိုဖို႔ အသင့္ရွိေနခဲ့ၾကတာပါ။
ဂေလဇာမိသားစုအေန.နဲ႔ လာမယ့္ေနြရာသီအေျပာင္းအေ႐ြ့ ေစ်းကြက္ မွာ အသင္းအတြက္ ျကယ္ပြင့္ ကစားသမား ေခၚယူဖို႔ အလိုရွိေနတာျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ သတင္းဌာနရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္အရေတာ့ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕အတြက္ ေရာ္နယ္ဒိုနဲ့ အႀကိဳ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီလို႔လည္း သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဂ်ုဗင္တပ္အတြက္ လိဂ္ 33 ပြဲမွာ 29 ဂိုးသြင္း ယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေရာ္နယ္ဒိုဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ေပၚတူဂီအသင္းနဲ႔အတူ ယူ႐ို 2020 ၿပိဳင္ပြဲကစားဖို႔အတြက္ အတူရွိေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုဗစ်ကြောင့် ဂျုဗင်တပ် အသင်းသည် လစာအများအပြားပေးချေနေရတဲ့ ကစားသမားတွေကို ရောင်းချဖို့ ရှိနေပြီး ရော်နယ်ဒိုလည်း ရောင်းချမယ့်စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ အသင်းကနေ ထွက်ဖို့ သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ ရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ရှင်ဂလေဇာမိသား စုနဲ့ ရော်နယ်ဒိုတို့ တိတ်တဆိတ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းတွေ အရ သိရဘာတယ် ။
ချန်ပီယံလိဂ် 16 သင်းအဆင့်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ ဂျုဗင်တပ် အသင်းသည် လက်ရှိမှာတော့ ပေါ်တူဂီ ဂိုးသွင်းဘုရင် တိုက်စစ် ကစားသမား ရော်နယ်ဒိုနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ နီးစပ်နေတယ်လို့ သိရဘာတယ် ။
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရယူနိုင်ဘို့. အတွက် ရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ ဂျုဗင်တပ် အသင်းသည်3နှစ်ဆက်တိုက်အစောပိုင်းအဆင့်တွေကနေပဲ လှည့်ပြန်နေခဲ့ရလို့ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပြီး ရော်နယ်ဒို နဲ့ လမ်းခွဲကိန်းဆိုက်လာခဲ့တာ တွေ့ရဘာတယ် ။
သတင်းတွေထွက်လာတိုင်းမှာ ရော်နယ်ဒိုက ယူနိုက်တက် အသင်း ကို ရောက်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကလည်း ထပ်ရှိလာပြန်ပါတယ်။ နှစ်တိုင်းလိုလိုမှာ ရော်နယ်ဒိုက ယူနိုက်တက်ဆီပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေက အခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြောင့်ထွက်ပေါ်လေ့ရှိပြီး အသင်းပရိသတ်တွေကလည်း ဘယ်အချိန်ပဲပြန်လာလာ ရင်ဖွင့်ကြိုဆိုဖို့ အသင့်ရှိနေခဲ့ကြတာပါ။
ဂလေဇာမိသားစုအနေ.နဲ့ လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွေ့ စျေးကွက် မှာ အသင်းအတွက် ကြယ်ပွင့် ကစားသမား ခေါ်ယူဖို့ အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန် သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ရော်နယ်ဒိုနဲ့ အကြို သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဂျုဗင်တပ်အတွက် လိဂ် 33 ပွဲမှာ 29 ဂိုးသွင်း ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့အတူ ယူရို 2020 ပြိုင်ပွဲကစားဖို့အတွက် အတူရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။